Shan arrimood oo aanay raggu si buuxdo uga hadlin iyo sababta ay arrintaas khalad u tahay | Hangool News
Shan arrimood oo aanay raggu si buuxdo uga hadlin iyo sababta ay arrintaas khalad u tahay
Hangoolnews:- Qiyaastii ku dhawaad 40-kii ilbiriqsiba qof ayaa isku dila meel ka mid ah dunida. Dadkaas intooda badan waa rag, kuwaas oo aanan dhibaatooyinkooda dadka la wadaagin ama aanin caawin dalban. Haddaba maxay yihiin arrimaha ay tahay in raggu ay wax badan ka hadlaan?
Baraha bulshada iyo nolosha dhabta ah
Isticmaalka baraha bulshada ayey suuragal tahay inay saameyn weyn ku reebaan dadka dhimirka laga hayo.
Daraasad ay sameysay Jaamacadda Pennsylvania ayaa waxa ay ogaatay in waqtiga badan ee aannu ku qaadanno baraha bulshada, ay u badan tahay inaannu kalinimo dareenno oo aannu isla hadalno. Hasayeeshee saameyntaasi dib waa loo badeli karaa.
“Inaad muddo kooban isticmaashid baraha bulshada waxa ay kugu hogaaminaysaa inay aad hoos ugu dhacaan walaaca iyo kalinimada aad wajihi kartid,” waxaa sidaasi sheegay qoraaga daraasadda Melissa Hunt. “Saameyntaas ayaa gaar ahaan waxa ay ku soo baxeen dad uu walaac badan haystay kuwaas oo daraasadda lagu wareystay.”
Image captionBaraha bulshada waxay qarin karaan sida dhabta ah ee uu qofku dareemayo
Hasayeeshee waa maxay waxa ku jira baraha bulshada ee dhibka gaysan kara?
Waxa ka dhaca baraha bulshada ayey adag tahay inay ka tarjumaan nolosha dhabta ah, sidaas oo ay tahayse waxba kama qaban karno hasayeeshee isbarbardhig ayaannu ku sameynaa, ayuu yiri Oscar Ybarra, oo ah barfasoor wax ka dhiga Jaamacadda Michigan.
“Dadku ma ay wada oga waxa halkan ka dhacaya, balse waxaa jira qaar og. Waxaad galaysaa khadka oo guud ahaan waxaad halkaas ku arkaysaa xog la soo xulay. Haddii aad muddo badan isticmaashid baraha bulshada, waxaa kugu badanaya inaad isbarbadhig sameysid, taasna waxa ay soo bandhigaysaa sida uu u kala duwan yahay dareenka dadka.”
Sahankii ugu weynaa ee noociisa oo kale ah ayaa BBC-da oo la shaqeynaysa hay’adda Wellcome Collection waxaa lagu ogaaday in dadka da’da yar ee ay da’doodu u dhaxayso 16 ilaa 24 ay dareemaan kalinimo.
2017 daraasad ay sameysay Oxford ayaa waxaa lagu ogaaday in ragga gaar ahaan ay ku adkaatay kalinimada.
“Waxa sii waday saaxiibnimada gabdhaha ayaa aheyd inay wax badan taleefanka ku wadahadleen,” ayuu yiri Robin Dunbar, kaas oo daraasadda horkacayay. “Waxa hakiyay saaxiibtimada ragga ayaa aheyd inay arrimo badan mar qura samaynayeen sida inay ciyaaraha kubadda cagta aadayeen, oo ay tagayeen goobaha khamriga lagu cabo, waxyaabo kalana ay dheelayeen. Marka waa inay dedaal sameeyaan. Taasi waxa ay aheyd arrin aad u adag.”
Marka kalinimadu ay noqoto xaalad jirta muddo dheer waxa ay saameyn halis ah ku reebi kartaa caafimaadka jirka iyo midka dhimirkaba. Daraasado ayaa kalinimada ku xiriiriyay halista ah in ruuxu asaasaqo, cuduro halis ah ay ku dhacaan iyo hab dhaqan ku hogaamin kara qofka caafimaad darro.
Daraasaad badan ayaa muujiyay in oohintu aanay nafta oo kaliya dajinin ee, balse ay gacan ka gaysato is-fahanka iyo isku xirka bulshada. Sidaas oo ay tahayna “wiilashu ma ay ooyaan” taas oo ah arrin ay adag tahay in la badelo.
Sida lagu sheegay daraasad laga sameeyay UK, 55% ragga ay da’doodu u dhaxayso 18-24 ayaa waxa ay dareemayaan in haddii ay ooyaan ay hoos u dhacayso raganimadooda.
“Waxaan wiilasha iyagoo aad u da’yar u sheegnaa in aanay muujin dareenkooda sababtoo ah in dareenkooda ay muujiyaan ayaa ah ‘tabar darro’,” ayuu yiri Colman O’Driscoll, oo ahaan jiray maareeyihii howlagallada iyo horumarinta ee hay’adda Lifeline, taas oo ah Australian ah oo bixisa taageero iyo adeegyo loogaga hortago in qofku uu isdilo.
Qofka reerkiisa biila
Daraasad dhawaan UK laga sameeyay ayaa muujinaysa in 42% ragga haweenka xiriirka la leh ay rumaysan yihiin in ay tahay inay helaan kharash ka badan midka xaaskiisa uu helaayo. Olumide Durojaiye waa mid ka mid ah dadkaas.
Lahaanshaha sawirkaBBC SPORT
Image captionOlumide Durojaiye waxa uu khadka dhexe uga dheelaa kooxda Woking
“Waxaan arkay aabahay oo ahaa qofka reerkeenna biilayay, oo habeen iyo maalin ayuu shaqeyn jiray, dalka oo dhan ayuu ku safri jiray anigana sidiisa oo kale inaan noqdo ayaan doonayaa,” Olumide ayaa sidaasi sheegay. “Inaan lacag sameeyo ayaan doonayaa sababtoo ah waxaan doonayaa inaan noqdo ‘ninka’ ay xaaskeyga doonayso.”
In qofka uu soo fuulo mas’uuliyad dhaqaale ayaa waxa ay sii kordhin kartaa arrimaha caafimaadka dhimirka ee qofkasta. 2015 daraasad ayaa lagu ogaaday in markasta oo 1% ay sare u kacdo shaqa la’aanta waxaa sare u kaca heerka isdilka 0.79%.
Josh became ayaa ku soo caanbaxay dalka UK markii uu sanadkii la soo dhaafay kaalinta saddexaad ka galay barnaamij ka baxa TV-ga oo lagu magacaabo Love Island.
“Goobta jimicsiga kama aanan bixi jirin ka hor inta aanan galin iyo markii aan gudaha ku jiraba waxaan xasuustaa in aan muraayadda isku eegi jiray walow aan murqo dhisan lahaa haddana ma doonayo inaan sii wado.”
“Xitaa xilligan aynu joogno, wax ka xun ma ay jirto inaad garoonka gashid kaddibna aad aragtid nin murqo dhisan leh oo ku garab socda kaddib aad is eegtid oo aad dareentid inaan murqaba lahayn.”